Fantaro i Veer Keram, mpikatroky ny fiteny Gondi · Global Voices teny Malagasy
Hitantana ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 5-11 Aogositra i Veer
Voadika ny 06 Aogositra 2020 4:13 GMT
Isa-kerinandro dia hamaly fanontaniana maromaro momba azy ny mpampiantrano tsirairay ary hanome fomba fijery fohy momba ny fiteniny. Miaraka amin'i Veer Keram (@veerkeram750) ny fanontaniana sy valiny etoana izay manolotra ny zavatra horesahiny mandritra ny herinandro amin'ny maha-mpampiantrano azy.
VK: Fiteny Dravidiana Afovoany Atsimo ampiasan'ny olona miisa 2 tapitrisa eo ho eo ao amin'ny foko Gond ny Gondi . Na dia fitenin'ny Gondi aza izany, ny ampahadimin'izy ireo ihany no tena mampiasa azy, ka mahatonga azy ho marefo amin'ny fanjavonana. Nanapa-kevitra ny hampiditra ny Gondi ao amin'ny fandaharam-pampianarana fototra any amin'ireo distrika betsaka foko ao amin'ny fanjakana ny Lehiben'ny Minisitra Madhya Pradesh teo aloha, Kamal Nath saingy tsy mbola notanterahana ny drafitra hatramin'izao. Tena olana goavana ny fihenana haingana hita tamin'ny isan'ny mpampiasa ny fiteny Gondi.
Araka izany teniko izany dia manana fanantenana sy nofinofy lehibe aho ho an'ny fiteniko amin'ny hoavy. Ny fiteny no fiara mitazona ny mari-panindroana anay hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny fiteny no mampita ny singa amin'ny kolontsainay sy ny fahalalana nentin-drazana manomboka amin'ny taranaka iray mankany amin'ny taranaka manaraka. Maniry ny fiteny Gondi aho mba ho lasa tsy maintsy ampiasaina any amin'ny fampianarana ambaratonga fototra hahafahan'ireo taranaka hoavy mifikitra amin'ny fihaviany hatrany am-boalohany. Maniry ihany koa aho mba hahazoany fankatoavana ao amin'ny fandaharana fahavalo ao amin'ny Lalàmpanorenanay, izay mitanisa ireo fiteny ofisialy ao India. Tokony hirehareha amin'ny fiteniny sy ny kolontsainy Ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Gond.